I-China Umgangatho oPhezulu woMbane woMbane oFakelwe iSikhululo esiSetyenzisiweyo sesiKhululo soMbane iWholesale-shengte abavelisi nabanikezeli |Shengte
Umgangatho oPhezulu woMbane weSikhululo soMbane esiFakelweyo eSenziweyo IsiKhululo esincinci se-Wholesale-shengte
I-substation efakwe ngaphambili (eyaziwa ngokuba yi-European box transformer), ngokuhambelana ne-GB / T17467-1998 kunye nemigangatho ye-IEC1330, ukufakwa okuguquguqukayo kunye nokufanelekileyo, ukulahlekelwa okuphantsi, ingxolo ephantsi, isiphaluka esifutshane kunye nokuchasana nokugqithiswa.
Ilungele amaziko ezorhwebo, izithili zokuhlala, amashishini emizi-mveliso kunye nemigodi, izibhedlele, izikolo, izikhululo zeenqwelo moya, izikhululo, amazibuko, umzila ongaphantsi komhlaba kunye nezinye iindawo.I-YBM kunye ne-YBP ziindidi ezimbini zoyilo.
Ulwakhiwo lwesitishi esincinci luyilo "lweliso" okanye "imveliso".
Izinto zegobolondo zemveliso yi-aluminium alloy plate, ipleyiti yensimbi engenasici, ipleyiti edibeneyo, i-glass fiber eqiniswe iplate yesamente, njl.
Isiseko se-substation senziwe ngentsimbi ye-galvanized channel okanye i-samente ene-corrosion resistance resistance kunye namandla aneleyo omatshini.
Isigqubuthelo esiphezulu somzimba webhokisi samkela isakhiwo esine-double-layer, ene-insulation efanelekileyo yokushisa, ukukhuselwa kwe-radiation kunye ne-ventilation effect.
Umbala webhokisi uguquguqukayo kwaye unokulungelelaniswa nendawo engqongileyo.
I-substation prefabricated (eyaziwa nangokuthi i-European box change), ngokuhambelana ne-GB / T17467-1998 standard kunye ne-IEC1330 esemgangathweni, ukufakwa okuguquguqukayo, ukulahlekelwa okuphantsi, ingxolo ephantsi, ukuchasana okunamandla kwisiphaluka esifutshane kunye nokugqithisa.Isebenza kumaziko ezorhwebo, iindawo zokuhlala, imizi-mveliso nemigodi, izibhedlele, izikolo, izikhululo zeenqwelo moya, izikhululo, amazibuko, iindlela ezingaphantsi komhlaba kunye nezinye iindawo.Kukho iindlela ezimbini zokucwangcisa: ifonti yegama (YBM) kunye nohlobo lwefonti (YBP).
· Ukuphakama: ≤ 1000m;
· Isantya somoya: ≤ 34m/S (akukho ngaphezu kwe-700pa);
· Ubushushu be-Ambient: ubushushu obuphezulu +40℃, ubuncinane bobushushu -35℃;
· Umswakama ohambelanayo: umyinge wemihla ngemihla awukho ngaphezu kwe-95%, kwaye umyinge wenyanga awukho ngaphezu kwe-95%;
· I-Shockproof: Ukukhawulezisa okuthe tye akukho ngaphezu kwe-0.4m/s2,Ukukhawuleza okuthe nkqo akukho ngaphezu kwe-0.15mm / s2;
· Ukuthambekela kwendawo yokufakela: akukho ngaphezu kwe-3 °;
• Imekobume yofakelo: Ifakwe kwindawo apho kungekho mlilo, ingozi yogqabhuko-dubulo, ungcoliseko olukhulu, umhlwa weekhemikhali kunye nokungcangcazela okukhulu.
· Ukuba ugqithise le miqathango ingasentla, ungathethathethana nenkampani.
· Ubungakanani obuncinci, ubume obuncinci kwaye kulula ukuyifaka.
A. Ulwakhiwo lwesikhululo esincinci lucwangciswe ngokwemilo ye "mesh" okanye "product".
B. Izinto zeqokobhe lemveliso zenziwe nge-aluminium alloy plate, ipleyiti yensimbi engenasici, ipleyiti edibeneyo, i-glass fiber eqiniswe ibhodi yesamente, kunye nokunye okunjalo.
C. Isiseko se-substation senziwe ngentsimbi ye-galvanized channel okanye i-samente, enokumelana ne-corrosion eqinile kunye namandla aneleyo omatshini.
D. Isigqubuthelo esiphezulu sekhabhinethi sithatha isakhiwo se-double-layer, esinokufudumala okulungileyo, i-radiation kunye nemiphumo ye-ventilation.
E. Igumbi ngalinye le-substation lihlukaniswe kwigumbi elizimeleyo nge-stroke.Igumbi ngalinye lixhotyiswe ngezinto zokukhanyisa.Umphezulu we-transformer uxhotyiswe ngesixhobo sokukhupha umoya ngokuzenzekelayo ukulungelelanisa ubushushu begumbi lokuguqula.
F. Ibhokisi iguquguquka ngombala kwaye inokulungelelaniswa nendawo engqongileyo.
Qaphela: imilinganiselo yeprodcut kunye nobunzima yidatha yexesha elithile kwaye inokutshintsha ngenxa yophuculo loyilo.
Ngaphambili: Ixabiso elona xabiso liPhantsi Isixhobo sokutshintsha amandla ombane we-GCS oMbane waManzi oMbane oPhantsi wokuTshintshela uMboneleli-shengte MOQ 1pcs
Okulandelayo: I-OEM eDityanisiweyo yeTransformer yeBhokisi yoMbane yoMbane yoMguquli kunye neFactory Price-shengte
I-OEM eDityanisiweyo yeTransformer yoMbane yoMbane Uhlobo lweTr...
Ixabiso Elilungileyo Ibhokisi entsha yeTransformer Professional Tra...